Iindaba -Iikhemikhali zeBaiyun zemihla ngemihla zithathe inxaxheba kwi-129th Canton Fair
Ukusukela nge-15 ka-Epreli ukuya kwi-24, i-129th China yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle ("i-Canton Fair") iya kubanjwa kwi-Intanethi. Phantse ababonisi abangama-26000, ngaphezulu kwezigidi ezi-2.7 zemiboniso kunye nabathengi abavela kumazwekazi ama-5 baya kuthatha inxaxheba kulo mboniso. U-Hebei Baiyun Daily Chemical Co., Ltd. uzakuthatha inxaxheba kule Canton Fair, azise uthotho lweemveliso, iisepha, iisepha zokuhlamba iimpahla kunye nezicoci ezingamanzi. Zininzi iintlobo zeemveliso, ezisemgangathweni, ezamkelwe kakuhle ngabathengi.
Saseka igumbi lokubonisa elikwi-Intanethi leCanton Fair ukubonisa iimveliso kusasazo ngqo. Ngexesha leCanton Fair, siza kuthatha usasazo ngqo lwesi-8, kwiimveliso zethu ezahlukeneyo. Uninzi lweemveliso ziya kuboniswa kwigumbi lethu losasazo, kwaye zonke iinkcukacha zeemveliso ziya kwaziswa ngononophelo. Emva koko ungabona ukuba yeyiphi imveliso esinokuyibonelela, kwaye yeyiphi inkonzo esinokuyinika.
Wamkelekile abahlobo abavela kwihlabathi liphela ukuba badibane nathi kwiCanton Fair. Ngelo xesha, ungafunda ngakumbi malunga nomzi-mveliso wethu, amandla emveliso, i-R & D kunye nobuchule bokuyila. Siyathemba ukuba singasebenzisana nabahlobo bethu abatsha kunye nabahlobo abadala ixesha elide kwaye siya kuphuhlisa sonke kunye.
Igumbi leMiboniso leCanton Fair: